Peggy ကို Cartမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Peggy ကို Carter
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ Captain Cartဟုတ်လား
26 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 332 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အခြား superhero timeline တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LEGO 71031 ကနေ minifigures ငါးခုကိုပထမဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်တယ် Marvel စတူဒီယိုရဲ့ Captain Cartသမိုင်းနောက်ခံကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 285 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အသစ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ပိုစတာများသည် LEGO ၏နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုကိုဖော်ပြသည် Marvel 2021 အစုံ
09 / 08 / 2021 09 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 335 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, စတိဗ်ရော်ဂျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
ပိုစတာအသစ်နှစ်ခုအတွက် Marvelကာတွန်းကားဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? စီးရီးများသည်ဤနွေရာသီ၏ LEGO စူပါဟီးရိုးတစ် ဦး ၏နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည်
Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? LEGO minifigure ၏အနာဂတ်အတွက် Season2၏အရိပ်အမြွက်
02 / 08 / 2021 03 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 335 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Peggy ကို Carter, ရာသီ 2, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego Marvel minifigure သည်အခြားရာသီတစ်ခု၏အတည်ပြုချက်ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လာနိုင်သည် Marvelလာတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ကာတွန်းစီးရီး
Lego ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း Marvel ဗိုလ်ကြီးဂartminifigures များ
26 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 370 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, ဗိုလ်ကြီးဂarte, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အဆိုပါ LEGO Group အဘို့မိမိတို့ပထမဆုံး minifigures ပွဲ ဦး ထွက်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Marvel's Peggy ကို Cartမကြာခင်မှာပဲ er နှင့်အတော်လေးရှိပါတယ်
Lego Marvel 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & The Hydra Stomper ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - အစိုင်အခဲ mech၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသေးစားပုံများ
14 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 381 Views စာ0မှတ်ချက် AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster, 76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Disney, Disney+, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, reviews, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Lego Marvel 76201 Captain C နှင့်အတူ multiverse သို့တိုးချဲ့နေသည်artအခြား & အဖြစ်မှန်ဗားရှင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့် er & The Hydra Stomper
အတည်ပြုပြီးနှင့်ကောလာဟလသတင်းများအတွက်ထုတ် LEGO အစုံ Marvelဘာလဲ ... ? နောက်တွဲယာဉ်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 448 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Marvel, Peggy ကို Carter, ပင့်ကူအဓိပတိ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ် Marvelဘာလဲ ... ? ယခုအွန်လိုင်းဖြစ်နေပြီးအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အနီးကပ်ကြည့်ရှုနေသည်
ဒုတိယ Lego Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? set 2021 များအတွက်ကောလဟာလသတင်းများအရ
04 / 06 / 2021 04 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 798 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, Captain America, Disney+, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Peggy ကို Carter, ကောလာဟလာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
တစ်စက္ကန့် Lego Marvel လာမည့်အပေါ်အခြေခံပြီးထား Disney+ စီးရီးအဘယ်သို့လျှင် ... ? သတင်းများအရနောက်ပိုင်းတွင်စင်ပေါ်အပေါ်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်
အဘယ်သို့လျှင် ... အနာဂတ် LEGO Marvel set ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် Disney+ စီးရီး?
05 / 04 / 2021 05 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1056 Views စာ0မှတ်ချက် Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, Disney+, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Peggy ကို Carter, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
လာမည့်လာမည့် LEGO အစုံသည်အမှန်တကယ် - စူးစမ်းလေ့လာလိုပါက What If ... ? Marvel အသစ်တစ်ခုကောလာဟလအရသိရသည်စီးရီး,